बुटवल पावरको जेठ ८ मा एजीएम हुँदै, के-के प्रस्ताव पेश गर्दै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » बुटवल पावरको जेठ ८ मा एजीएम हुँदै, के-के प्रस्ताव पेश गर्दै ?
काठमाडौं - जेठ ८ गते बुटवल पावर कम्पनीको २५ औं वार्षिक साधारण सभा हुने भएको छ । बुटवल पावरले साधारण सभामा २०% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव लैजाँदैछ । साथै, कम्पनीले एफपीओपछि कायम हुने पुँजीको २०% नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । यसअधारमा एफपीओ भर्ने लगानीकर्ताले पनि लाभांश पाउनेछन् ।
सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट २ जना सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियम १६ (क, ख, ग) संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि साधारण सभामा लगिने भएको छ । सभा कार्की ब्यांकेट, बबरमहल काठमाडौंमा बिहान १० बजे सुरु हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को वित्तीय विवरण र सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गर्ने एजेन्डा पनि छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को लागी लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने अर्को एजेन्डा पनि पेश हुँदैछ । साधारण सभा गर्नका लागि कम्पनीले वैशाख २७ देखि जेठ ८ गतेसम्म बुक क्लोज गरिरहेको छ । वैशाख २६ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र नगद लाभांश सुरक्षित गर्न सुक्नेछन् ।
प्रकाशित : Friday, May 18, 2018
बैंकिङका बादशाह पृथ्वी बहादुर पाण्डेको 'सक्सेस-स्टोरी' : 'ऋण खोजेर बैंक खोलें, व्यापार गर्न सीइओ छोडें' (भिडियो)